merolagani - समता लघुवित्तको बुकक्लोज, २०० प्रतिशत हकप्रद भर्न कहिलेसम्म बन्नुपर्छ शेयरधनी?
समता लघुवित्तको बुकक्लोज, २०० प्रतिशत हकप्रद भर्न कहिलेसम्म बन्नुपर्छ शेयरधनी?
Sep 10, 2019 05:36 PM Merolagani
समता लघुवित्त वित्तीय संस्था (SMATA) ले चुक्ता पूँजीको २०० प्रतिशत हकप्रद निष्काशनका लागि शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द गर्ने मिति (बुकक्लोज) निर्धारण गरेको छ ।
लघुवित्त सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको ८० औं बैठकले असोज १ गते हकप्रदको बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार भदौ ३१ गते मंगलबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहने शेयरधनीले मात्र लघुवित्तको हकप्रद भर्न पाउनेछन्।
लघुवित्तले धितोपत्र बोर्डबाट भदौ २९ गते चुक्ता पूँजी ६ करोड ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको १ः२ अनुपातमा १२ लाख १३ हजार ४४० कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री अनुमति पाएको थियो। उक्त हकप्रद प्रस्ताव लघुवित्तका २०७५ मंसिर २७ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको थियो।
हकप्रद निष्काशनका लागि कम्पनीले एनआइबिएल एस क्यापिटललाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक चयन गरिसकेको छ।
हकप्रद पश्चात लघुवित्तको १८ करोड २० लाख १६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुग्नेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तले अघिल्लो आवको तुलनामा २४९ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएर २ करोड ५७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिशेयर आम्दानी ४२ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम गरेको छ। लघुवित्तको जगेडा कोषमा ८ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ ।
लघुवित्तको भदौ २४ गते दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता एक हजार २६५ रुपैयाँमा शेयर कारोबार भएको छ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलको साधारण सभा आह्वान, बुकक्लोज कहिले?
Dec 17, 2019 11:49 AM
स्पर्स लघुवित्तले तोक्यो बुकक्लोज
Dec 16, 2019 05:54 PM
आरएमडीसी लघुवित्तको बुकक्लोज तय
Dec 12, 2019 05:40 PM
अंकित मूल्यभन्दा तल शेयरमूल्य रहेको रिडी हाइड्रोले तोक्यो लाभांश बाँड्न बुकक्लोज
Nov 27, 2019 12:41 PM
एनएमबि लघुवित्तले तोक्यो हकप्रद निष्काशनका लागि बुकक्लोज
Oct 15, 2019 02:07 PM
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको हकप्रदको बुकक्लोज निर्धारण
Oct 01, 2019 11:56 AM
अहिले बैंकमा ऋण दिने पैसा ‘फालाफाल’ भएपनि पछि ‘अभाव’ हुने भन्दै विदेशबाट पैसा ल्याउन तम्सिए
Jul 02, 2020 06:28 PM
अहिले बैंकमा ऋण दिने पैसा ‘फालाफाल’ भएपनि केही महिना भित्रमा नै ऋण दिने पैसाको अभाव हुने संकेत पाएपछि बैंकहरूले धमाधम विदेशबाट रकम ल्याउन थालेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा नभएपछि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्ने र रेमिटयान्स रकम पनि कमी हुने भएकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने भन्दै बैंकले विदेशबाट रकम ल्याउन थालेका हुन् ।
‘असहज परिस्थिामा परेकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत उकास्ने काम हुने छ,’ गभर्नर
Jul 02, 2020 06:22 PM
विश्वभरमा १४८ भ्याक्सिनमाथि काम हुदैँ, १७ वटा क्लीनिकल ट्रायलको चरणमा
Jul 02, 2020 05:52 PM
राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरहरूलाई सोध्याे–‘मौद्रिक नीतिमा कस्तो ल्याउँदा ठीक हुन्छ’
Jul 02, 2020 05:36 PM